HomeTURKEYCoast Mediterranean33 Mersin
Iyada oo Uzbekistan, oo si joogto ah u ballaarineysay una ballaarineysay xiriirkeeda adduunka dibedda tan iyo maalintii ay ku dhawaaqday madax-bannaanideeda, howlaha ganacsi ee waddankeennu waxay ku sii wadeen horumarro aad u muhiim ah dhowaan. Ganacsiga labada dal [More ...]
Shirkadeena, oo kaalinteeda ka qaadatay inta badan shirkadaha aad loo raadsado iyo doorbida ururada gaadiidka caalamiga ah oo wata howlaheeda dhameystiran ee howlaha gaadiidka iyo howlaha kastamka ilaa maalintii ugu horeysay ee ay gashay qeybta saadka. [More ...]
Qeybta gaadiidka ayaa ku jirtay waqtiyo aad u mashquul badan marka loo eego kororka xogta dhoofinta iyo soo dejinta sanadihii la soo dhaafay. Iyadoo ku dhawaad ​​dhammaan waddamada adduunka, gaar ahaan Yurub, Aasiya iyo Bariga Dhexe [More ...]
Duqa magaalada Mersin ee magaalo xeebeedka Vahap Seçer wuxuu martida u ahaa Emine Eroğlan barnaamijka cinwaan looga dhigay oo laga soo bilaabo badda Mediterranean ilaa Taurus oo ah raadiyaha TRT Çukurova. Duqa magaalada Seçer wuxuu qiimeeyay 9ka bilood ee hartay barnaamijka wuxuuna sharaxay mashaariicda degmada. [More ...]
Hawlaheena ganacsi, kuwaas oo leh taariikh qadiim ah oo leh Ruushka, halkaas oo xiriirkeenu uu gaadhay heer uu jabsaday sababao badan oo ah dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo waayihii la soo dhaafay, ayaa ku soo laabtay heerkoodii caadiga ahaa taas oo ay ka dhasheen wada hadal heer sare ah iyo wadaxaajood. [More ...]
Kazakhstan, oo ka mid ah jamhuuriyadaha Turkey-ga isla markaana ah dalka ugu weyn marka la eego dhinaca, ayaa leh taariikh qadiim ah. Waxaa jira iskaashi badan oo siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo ka dhexeeya labada dal. [More ...]
Hababka Dhul, Hawada, jidadka tareenka iyo bada waa jidka loo maro gaadiidka daboolaya dhammaan goobaha safarka gudaha iyo kan caalamiga ah. Alaab kasto oo soo baxda waa in loo geeya qodobo kala duwan marka loo eego qaab dhismeedka juqraafi ahaan iyo deg-degga ah. [More ...]
Arinch logistics ee Gaadiidka Mashruuca Azerbaijan
Gaadiidka xamuulka qaada ee wadada ayaa inta badan lagu qaadaa wadamada aan badda ku xirnayn. Saadka ee baaxadda ganacsiga ay la leeyihiin dhammaan waddamada Yurub iyo Aasiya ee waddankeenna ku leh ama aan lahayn xiriir badda [More ...]
Gaadiidka Mersin ee Azerbaijan
Waddankeenna, oo u adeegta sidii buundo u dhaxaysa qaaradaha Yurub iyo Aasiya dartiis awgeed, waa isku waqti marin isku-socodka labada qaaradood. Labada jagoba booska awgood [More ...]
Shirkadda Gaarka ah ee Qaybta Badda ee Shirkadda Jordan
Waa silsilad leh habab badan oo gaadiid oo kala duwan waaxda gaadiidka caalamiga ah. Gaadiidka xamuulka qaada oo buuxa, gaadiid xamuul, gaadiid culus iyo gaas [More ...]
Duqa Degmooyinka Magaalada Mersin Vahap Seçer wuxuu ka qeyb galay munaasabaddii 28-guurada sanad-guurada ee Mersin Warshadaha iyo Ururka Ganacsatada (MESİAD) iyo Berdan Bolt sanadguuradii 41-aad ee Gala Night. Gegada diyaaradaha ee dalxiiska iyo ganacsiga Mersin [More ...]
Saadka Arinta Gaadiidka Azerbaijan
Dalkeenna, oo xiriir dhow iyo xiriir dhow la leh waddamo badan oo ku takhasusay ganacsiga shisheeye, wuxuu dhoofinta joogtada ah la leeyahay dhammaan waddamada Yurub iyo Aasiya iyo Afrika, Bariga Dhexe, Bariga Fog iyo Mareykanka. [More ...]